Real Madrid oo soo bandhigtay qiimaha ay kaga iibineyso Varane kooxaha xiiseenaya ay ka mid tahay Juventus – Gool FM
(Yurub) 03 Apriil 2019. Website-ka Goal.com ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay dooneyso inay iska iibiso Raphael Varane oo ay xiiseeneyso koox kasta inay la saxiixato, sida kooxda reer Talyaani ee Juventus.
Raphael Varane ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhow yahay ka tagista kooxda Real Madrid, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan, sida ay xaqiijiyeen wararbaahino badan ee gudaha Yurub ah.
Barnaamijka caanka ah ee “Jogones” ayaa lagu sheegay in 25 jirka reer France uu ku war galiyay madaxda kooxda Real Madrid, uu doonayo ka tagista garoonka Santiago Bernabéu.
Website-ka Goal.com ayaa dhinaca kale sheegay in kooxda Real Madrid aysan xiligan diyaar u ahayen inay iska fasaxdo adeega Varane, islamarkaana ay sameyn doonaan wax walba ee suurtagal ka dhigi kara, si ay u sii haystaan xidiga reer France.
Balse sida ay wararka xaqiijinayaan maamulka Los Blancos ayaa ku adkeesaneysa in hadiiba uu Varane ka tagayo garoonka Santiago Bernabéu ay ku dooneyso qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa ee gaarsiisan 500 milyan euro, taasoo la macno ah inaysan dooneynin bixitaankiisa, isla markaana ay fariin u tahay kooxaha xiiseenaya adeegiisa, taasoo xaalada sii adkeeneysa.
Sida laga soo xigtay wargeysyada qaarkood, waxaa la rumeysan yahay in rabitaanka Raphaël Varane ee ah inuu doonayo ka tagista kooxda, qorsho uu ku doonayo inuu helo mushaar ka badan kan haatan uu ka qaato Los Blancos.